हाम्रोखबर मङ्गलबार, चैत्र ५ २०७५
मोमिला जोशी, अर्थात् साहित्यमा मोमिला । नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनको नाम नसुन्ने सायद कमै होलान् । शालीन कविता लेखनमा अत्यन्त लोकप्रिय रहेकी मोमिला निबन्धमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल प्रतिभा हुन् । प्रस्तुत छ– उनै मोमिलासँग हाम्रोखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
किनकि जहाँ चेतना छस त्यहीँ विद्रोह हुन्छ । यस्ता कुराहरूले मलाई बाँचेको आभास दिन्छ । मुर्दालाई आगोमा जलाए पनि, नङ्ग्याए पनि कहाँ विद्रोह गर्छ र !
तपाईँले भनेका सबै संवेदनहरू जीवनबाट अलग छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने म दार्श्निक कविता मन पराउँछु । र यस्तै हुन्छन् मेरा कविताहरू । तर महिला हुनुको अर्थमा कुनै न कुनै ठाउँमा त महिलाकै कविता आवश्यक पर्छ नै । फेरि त्यो मेरो सजातीय संवेदना भयो । यद्यपि मलाई साँच्चै मनपर्ने भनेको जुनसुकै विषयका दार्श्निक कविताहरू नै हुन् । यति भन्दा भन्दै पनि मान्छेले जे कुरा बढी सोच्छस त्यही कुरा बढी भेट्छ । सम्भवतः तपाईं पनि जे कुरा खोजिरहनुभएको छस सायद, त्यही भेटिरहनुभएको छ र त्यही भनिरहनुभएको छ ।
कतिपय रहरले आउँछन् भने कतिपय कवि भएरै आउँछन् । कवि भएरै आएकाहरूको कवितै पारा छ भने केवल रहरले आउनेहरूको आफ्नो चुरीफुरी पारा छस जो बोक्राको रवाफिलो रौनकमा रमाइरहेका छन् । बस् ! यस्तै नै हो ।
समाज अनुदार त होइन, यसलाई हेपेको जस्तो लागेको मात्र हो । किनकि यथार्थतः कविता भनेकै थोरैमा धेरै कुरा बोलिने विधा हो । त्यसैले प्रायः मानिसहरूले आफ्नो लेखनलाई कविताबाट सुरुआात गर्छन् । यसर्थमा कवितालाई सस्तो मानिएको मात्र हो । वास्तवमा कविता अर्थात् काव्य भनेकै साहित्य हो । पछिमात्र हो, अरू जोडिएको । फेरि थोरैमा धेरै भनिने भएकाले अर्थात् मूलतः कविता सूत्रात्मक हुनु र यस्ता कविता गहन हुने भएकाले यस्ता कवितालाई बुभ्mन मान्छेले गहिराइमा डुबुल्की मार्नुपर्छ एकातिर भने अर्का्तिर कथा भनेको सम्झन सजिलो हुन्छ । त्यसकारणले पनि कथातिर मान्छे यसै मोडिन्छन् । त्यसैले पनि अहिले कथाजस्तो कविता बढी लेखिन्छन् । यस्ता कथाजस्तो कविता सजिलै बुझ्छन् पनि । तर ‘लङ लास्टिङ’ र कविताधर्मको बढीभन्दा बढी निर्वाह भने सूत्रात्मक दार्श्निक कवितामै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । भनेपछि कविता अहिले हेपिएको अवस्थामा हो ?